MIKAIKAIKA MAFY NY MPITATITRA : Tapaka ny lalam-pirenena fahadimy noho ny orana be loatra
Noho ny firotsahan’ny orana be loatra ny 13 sy 14 avrily lasa iny, dia nihotsaka ny ampahan-dalana maro mampitohy an’i Soanierana Ivongo amin’i Mananara Avaratra, dia tapaka hatramin’ny arabe tara misy amin’iny faritra iny. 20 avril 2012
Anisan’ny tena nitondra fahasimbana, ny arabe tara ao Manakatafana, toa izany ihany koa ny bakan’i Vohibe, mialoha ny idirana an’i Mananara Avaratra, fa zakan’ny rano lasa any Maroantsetra mihitsy. Vokatr’izany tranga sy seho misy amin’iny lalam-pirenena fahadimy iny, dia mikaikaika mafy ny mpitatitra, fa mihitsoka avokoa ny fivezivezen’ny fiara mampitohy amin’i Mananara Avaratra sy Maroantsetra. Milaza ho very fanahy mbola velona ihany koa izy ireo fa fotoana fandoavana ny patanty amin’ny fitaterana izao vanin’andro izao, nefa tsy misy azo atao satria voatery mihitsoka ny asa fanaovana fitaterana noho io fahatapahan’ny lalam-pirenena fahadimy io. Tapaka noho izany ihany koa ny tetezana mampitohy an’i Mananara amin’i Maroantsetra, koa miantso ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny ny mpitatitra sy ny mpampiasa ny lalana amin’iny lalam-pirenena fahadimy iny, hitondra vahaolana malaky hisorohana ny loza samihafa mety hitranga.
Nisondrotra ny saran-dalana
Noho ny fahatapahan’ny lalana eny amin’ny lalam-pirenena faha-5 eo amin’ny 35 km miala an’i Fenoarivo-Atsinanana, tafakatra 6 000 Ariary ny saran-dalana mampitohy an’i Fenorivo-Atsinanana sy Soanierana-Ivongo, lalana 62 km monja raha 4 000 Ariary izany teo aloha.
Noho ny orana mikija ny faha-14 avrily lasa teo no nahatapaka ity lalana ity raha ny fanazavana voaray. Lalana izay be mpampiasa ary ivezivezen’ny vokatra maro. Sahirana, araka izany, ireo mpampiasa iny lalam-pirenena faha-5 iny amin’ity fahatapahan-dalana ity.
Miantso ny tompon’andraikitra isan-tokony mba hijery akaiky ny fanarenana io fahatapahana eo amin’ny 35 km miala an’i Fenoarivo-Atsinanana io, sady ho fisorohana ihany koa ny fanararaotan’ny mpamily sasany sy ireo mpitatitra entana.
Kamy sy Gilbert R